Fascinating History of Human Evolution – Zwe Naing – Medium
Fascinating History of Human Evolution
လူတွေ မျောက်ကဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကို အများစုလက်ခံထားကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် မျောက်တွေဘယ်ကတစ်ဆင့် ဆင်းသက်လာသလဲဆိုတာကို ပထမဆုံးသက်ရှိဖြစ်တဲ့ ဆဲလ်တစ်လုံးသတ္တဝါ (Single-celled organisms) မှစပြီး နောက်ဆုံးလူသားအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်(Timeline) ပြောပြသွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 3.5 billion years ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာသက်တမ်း 4.5 billion years နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကမ္ဘာစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်း၊ ကမ္ဘာကြီးအပူချိန်ကျသွားပြီး တည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်(after stabalization) မှာ စတင်ခဲ့တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းပြောလို့ရပါတယ်။ ယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ များပြားလှတဲ့ သတ္တဝါအမျိုးအစားတွေဖြစ်စေတဲ့ အဓိကတွန်းအားကတော့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်(evolution) ဖြစ်ပါတယ်။ Evolution ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က သဘာဝနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးမျိုးစိတ်ရဲ့ ပိုပြီးမျက်နှာသာပေးရွေးချယ်သွားတဲ့သဘော (Natural selection) ပါ။ ကိုက်ညီတဲ့ DNA ကို တဖြည်းဖြည်းဆင့်ကဲသယ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကို ရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Evolution History ကို လူတိုင်း သိသင့်တယ်ယူဆတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သက်ရှိတွေရဲ့ သက်မဲ့တွေနဲ့ ခြားနားတဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို အရင်ဆုံးပြောဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ပထမဆုံးသက်ရှိတွေကို သက်မဲ့တွေမှ ခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကွဲပြားချက်က စွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်စွမ်း(metabolism)ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတ်ိယတစ်ခုက အတွင်းပိုင်း အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေကို မျှခြေတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်း(homeostasis) ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကတော့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်း(reproduction) ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲထိန်းညှိနိုင်စွမ်း(adaptation) ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးချက်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ပထမဆုံးသက်ရှိကတော့ ဆဲလ်တစ်လုံးသတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ Prokaryotes တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတ္တဝါတွေဟာ သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ မီးတောင်ကဲ့သို့ ထွက်ပေါက်များ(Massive oceanic vents) မှ အပူစွမ်းအင် (Heat Energy) နဲ့ ဓာတုစွမ်းအင်(Chemical Energy) တို့ကို အသုံးပြုတဲ့ သက်ရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။
3.5 billion years ago — နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာ တချို့ Prokaryotes ဟာ ရေနက်ပိုင်းမှ သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်အနီးကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဓာတုစွမ်းအင်အစား ဒီသမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး အစာချက်(Photosynthesis) ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသက်ရှိတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက အတော်လေးရိုးစင်းပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များများစားစားမရှိသေးပါဘူး။ မျိုးပွားတာကတော့ Binary Fission နဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
2.5 billion years ago — Eukaryotes တွေကျတော့ Prokaryotes တွေထက်နည်းနည်းပိုပြီး အဆင့်မြင့်လာပါတယ်။ ထူးခြားချက်က လုပ်ဆောင်ချက်အသီးသီးကို သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အဂါင်္တွေပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Nucleus သီးသန့်ရှိလာခြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ Eukaryotes တွေကတော့ Mitosis process နဲ့ မျိုးပွားပါတယ်။
1 billion years ago — Eukaryotes တွေပေါင်းစပ်ပြီး ဆဲလ်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ (Multicellular organisms) တွေဖြစ်လာပါတယ်။
500 million years ago — ပထမဆုံး ဦးနှောက်တွေ ဖွဲ့ဖြိုးလာပါတယ်။ ဒီဖွံဖြိုးမှုနဲ့အတူ ပိုပြီးအရေးပါတာက ပတ်ဝန်းကျင်ကို တုံ့ပြန်စွမ်း(response)အားကောင်းလာပြီး၊ ပိုပြီးလိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်စွမ်း(Adaptation) ရှိလာတာပါ။ ကိုယ်ထည်အချိုးအစားများလည်း ပိုမိုကွဲပြားလာပါတယ်။
First organisms with nervous system
400 million years ago — ဒီအဆင့်ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဆုံး ငါးကဲ့သို့ ရေနေသတ္တဝါတစ်ကောင် ကုန်းပေါ်ကို စပြီးတက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးရဲ့ ရေယက်တွေကနေတဆင့် ခြေလက်အဂါင်္တွေ တဖြည်းဖြည်းဖွံဖြိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
365 million years — ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ(amphibians) တွေ စတင်ဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ ဒီသတ္တဝါတွေမှာ ကုန်းနဲ့ ရေနှစ်မျိုးလုံးမှာ ရှင်သန်နိုင်အောင် ပါးဟက် (Gills) နှင့် အဆုတ် (Lungs) တွေဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ မျိုးပွားအဂါင်္(reproductive organs) တွေ ပိုပြီးဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥချတဲ့အခါမှာတော့ ရေထဲကိုသွားချရပါတယ်။
300 million years — တွားသွားသတ္တဝါ(reptiles) တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဥချတဲ့အခါမှာ ရေထဲကိုသွားချစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကုန်းပေါ်မှာတင် ချနိုင်လာပါတယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေက ဒီသတ္တဝါတွေကနေ ဆင်းသက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
220 million years — တွားသွားသတ္တဝါမိသားစုကနေ ကွဲထွက်လာပြီး ပထမဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါတွေပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိုင်နိုဆောကဲ့သို့ တွားသွားသတ္တဝါအများစုကြားမှာ ဒီနို့တိုက်သတ္တဝါတွေက ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်နေရာမရပါဘူး။
100 million years — ဥက္ကာခဲတစ်ခု(meteorite impact) ကြောင့် ဒိုင်နိုဆောတွေ အားလုံးမျိုးတုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေပိုပြီး နေရာရလာပါတယ်။ ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါကတော့ ယခုကြွက်ကဲ့သို့ အလားတူသတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတ္တဝါမှတစ်ဆင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ယခုသတ္တဝါအများစုဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
80 million years — ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ လူအများစုသိထားတဲ့ မျောက်မျိုးကွဲ(primates) တွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
1.8 million years — ပထမဆုံး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်မှာ လမ်းစလျှောက်တဲ့ သတ္တဝါ Homo erectus စတင်ဖြစ်လာပါတယ်။
160, 000 years — ပထမဆုံးလူသားလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ Homo sapiens မျိုးနွယ်ဝင်ကို အာဖရိကတိုက်မှာ စတင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေက ဒီမျိုးနွယ်ဝင်ပါ။
အခုနောက်ပိုင်း အတော်လေးဖွံဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ DNA Sequencing နဲ့ Readioactive Dating လိုနည်းပညာတွေနဲ့ သတ္တဝါမျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ဆက်သွယ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်လာပါတယ်။ မိဘရဲ့ DNA ကနေ သားသမီးရဲ့ DNA အဖြစ်ဆင်းသက်စဉ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုမှာ ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုကို အားပေး၊ မကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုကို ပယ်ရင်း သဘာဝကအလိုအလျောက်ရွေးချယ်သွားရင်း ယခုကဲ့သို့ ဆန်းပြားများပြားလှတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ သတ္တဝါတွေကို တစ်ကောင်ချင်းသက်သက်စီ မလေ့လာပဲနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စပ်စပ်ပြီးလေ့လာရင် တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
လူသားအပါအဝင် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံး ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းသိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Bonus — အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Prokaryotes တွေပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သီအိုရီအပေါ် ဆွေးနွေး(Debate) လုပ်ကြတုန်းပါ။ တခြားလူသိများတဲ့သီအိုရီကတော့ မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်မှာ Microscopic life စတင်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မားစ်မှ လွင့်ထွက်လာတဲ့ ဥက္ကာခဲတွေမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာပေါ်ကျရောက်လာတဲ့ ဥက္ကာခဲများမှ သက်ရှိတွေရောက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သက်သေများကို လေ့လာတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခင်တော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Share scientific knowledge!
Connect with me on Linkedin @ https://www.linkedin.com/in/zwenaing/
Never missastory from Zwe Naing, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Zwe Naing